Ngabe Ufundile Nge-Butyl Tape?
I-Butyl tape engenamanzi uhlobo lwetheyiphu yokuvala uphawu engangeni manzi engapheli engamanzi eyenziwe ngokhuni lwe-butyl njengempahla eyinhloko eluhlaza, nezinye izithasiselo, futhi icutshungulwa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe, obunamathela ngokuqinile ezindaweni ezahlukahlukene zempahla. Ngasikhathi sinye, inesimo sezulu esihle kakhulu ...
Umbiko Wokucwaninga Emakethe we-Global Hot Melt Adhesive (HMA) 2020: Ukuhlaziywa Komthelela Wokuqubuka Kwe-COVID-19 Umbiko wocwaningo lwe-'Hot Melt Adhesive (HMA) 'obhalwe yiBrand Essence Market Research ucacisa imininingwane efanelekile yemakethe nokuncintisana kanye nemininingwane yesifunda neyomthengi. Ngamafuphi ...
I-HOT MELT GLUE STICKS MARKET DEMAND & AWOT ANALYSIS NGO-2025: ABADLALI ABAKHULU 3M, KENYON GROUP, INFINITY BOND
Abahlaziyi bethu abaqapha isimo ezungeze iGlobe bachaza ukuthi ngemuva kwenhlekelele ye-COVID-19 imakethe izokhiqiza amathuba okukhokhela abakhiqizi. Inhloso yalo mbiko ukuhlinzeka ngomfanekiso oqhubekayo ngesimo esikhona njengamanje, ukwehla kwezomnotho kanye nomphumela we-COVID-19 embonini njengo ...